लकडाउनमा भरपर्दो साथी बनेको ‘एक कल समस्या हल’ - Dainik Online Dainik Online
प्रकाशित मिति : २६ जेष्ठ २०७७, सोमबार १ : १२
दाङ । लामो समयदेखि जारी लकडाउनका कारणले गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको समस्या भयो ? समस्या भएकै हो भने चिन्ता नगर्नुहोस् । ‘एक कल समस्या हल’ छँदैछ ।
दाङका युवाहरुले शुरु गरेको ‘एक कल समस्या हल’ लकडाउनको संकटका बेलामा भरपर्दो साथी बनेको छ । जिल्लाका युवाहरु अमर अधिकारी र भ्युराज थापा मगरले सुरु गरेको ‘एक कल समस्या हल’ले घरघरमै शुल्क नलिएरै सामान पुराउँदै आएको छ । शहरवासीहरुको समस्याको साथीमात्रै होइन ‘एक कल समस्या हल’ले चारजनालाई रोजगारी समेत दिएको छ ।
‘एक कल समस्या हल’ ३ वर्ष अगाडि शुरु गरिएको थियो । यो सेवा लकडाउनको अवधिमा झनै प्रभावकारी भएको छ । लकडाउनका कारण घरबाट बाहिर निस्कन नसकिने अवस्था र जोखिम भएको अवस्थामा यी युवाहरुले छिटो र अतिरिक्त चार्ज बिना सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् ।
यसका सञ्चालकमध्यका अमर अधिकारीले लकडाउनको समयमा पनि अत्यावश्यक सामग्रीहरु आफूहरुले घरसम्मै पु¥याइरहेको बताउनुभयो । ‘फोन र अनलाइनमार्फत सेवाग्राहीलाई किराना सामग्री, खाना, नास्ता, फलफूल, तरकारी, प्लम्बिङलगायतका विभिन्न सेवाहरु दिइरहेका छौं’, अधिकारीले भन्नुभयो ।
सञ्चालक अधिकारीले लकडाउनको अवधिमा सेवाग्राहीहरु ह्वात्तै बढेको पनि बताउनुभयो । ‘अघिल्ला वर्षहरुमा सेवाग्राही थोरै हुनुहुन्थ्यो । लकडाउनको अवधिमा दैनिक २० देखि ३० जना नयाँ सेवाग्राही जोडिनुभएको छ’, अधिकारीले भन्नुभयो । ‘पहिले हामीसँग सेवा लिने १ सय ५० जना मात्र नियमित ग्राहक हुनुहुन्थ्यो । चौथो वर्षमा प्रवेश गरेसँगै दैनिक २०÷३० जना नयाँ ग्राहक थपिनुभएको छ र अहिले हामीसँग सेवा लिने २ हजार बढी नियमित ग्राहकहरु हुनुहुन्छ’, अधिकारीको भनाई छ ।
घोराही आसपासको ६ किलोमिटर क्षेत्रमा बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म ‘एक कल समस्या हल’ले सेवा दिँदै आएको छ । ‘एक कल समस्या हल’ले लडडाउन शुरु भएदेखि यता १ हजार २ सय बढीलाई सेवा दिइसकेको जनाएको छ । नियमित औषधि सेवन गर्ने दीर्घरोगीहरुलाई समेत औषधि घरमै पुराउने गरिएको अधिकारीले बताउनु भयो । मोबाइल नं. ९८०१३५३८८७ मा सम्पर्क गरेमा तत्काल सेवा उपलब्ध गराइने उहाँले बताउनुभयो ।